Gerard Pique Iyo Iker Casillas Oo Ka Dooday Shaqsiyaada Guud Ahaan Ciyaaraha Aduunka Ugu Fiican Iyo Sida Ay Ugu Qaybsameen - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Gerard Pique Iyo Iker Casillas Oo Ka Dooday Shaqsiyaada Guud Ahaan Ciyaaraha Aduunka Ugu Fiican Iyo Sida Ay Ugu Qaybsameen
Gerard Pique Iyo Iker Casillas Oo Ka Dooday Shaqsiyaada Guud Ahaan Ciyaaraha Aduunka Ugu Fiican Iyo Sida Ay Ugu Qaybsameen2017-07-17T12:47:10+00:00
Gerard Pique iyo Iker Casillas ayaa ah laba shaqsi oo saaxiibo ah ilsa markaana uu haddna ka dhexeeyo xifiltan salka ku haya kooxaha Real Madrid iyo Barcelona. Inkasta oo uu Casillas muddo ka maqnaa Bernabeu oo ka tirsan yahay kooxda FC Porto, haddana wali waxa uu wataa midabkii cadaa ee Los Blancos wuxuuna Pique uga jawaabaa waxyaabaha uu soo dhigo baraha bulshada.
Inkasta oo ay Gerard Pique iyo Iker Casillas ay marar badan waxyaabo kaftan ah ku wadaageen barta twitterka markan waxay ku doodeen shaqsiyaada guud ahaan ugu bandhiga fiican ciyaaraha oo dhan, iyada oo Gerard Pique uu dooda bilaabay isaga oo liiska dadka ciyaaraha caalamka ugu fiican ee uu aaminsan yahay soo dhigay bartiisa twitterka.
Laakiin Iker Casillas ayaa xidigii ay xulka qaranka Spain guulaha badan soo wada gaadheen ku khilaafay liiska uu magacaabay wuxuuna markiisa soo dhigay liis ka duwan balse aad si cad u garanayso sida ay ugu qaybsan yihiin midabada Real Madrid iyo Barcelona.
Waxaa doodan furay in Roger Federer uu markii siddeedaad ku guulaystay Wimbledon wuxuuna Gerard Pique tilmaamay in Lionel Messi, Michael Jordan, Roger Federer ay yihiin saddexdii ugu fiicnaa ee uu abid ciyaaraha ku arkay.
Wuxuuna bartiisa twitterka ku soo qoray: “Leo Messi, Michael Jordan, Roger Federer, saddexdii ugu fiicnaa ee aan abid arko”.
Laakiin Iker Casillas ayaa markiisa ugu jawaabay liiska uu u arko kuwii abid ugu fiicnaa wuxuuna soo qoray: “Añado Kobe Bryant , Cristiano, RafaelNadal , TigerWoods ,Schumacher , Michael Phelps , ValeYellow, Serenawilliams”
Laakiin Casillas ayaan hal magac ka soo qaadan saddexdii shaqsi ee uu Pique sheegay in ay yihiin kuwa abid ugu fiican ee uu arkay.
Your Name Your Email Enter Your Message « Kenya poll one of the most expensive in the world
Dowladda oo guddi u xil saareysa qiimeynta Khasaaraha ka dhashay maqnaanshihii Internet-ka »